Posted on जनवरी 29, 2010 by आर. बी. बुढाथोकी	नेपाली ताराको उत्कृष्ट बीसबाट बाहिरिएपछि मल्लिका कार्कीका लागि लागेको थियो, गायन क्षेत्र यति नै रहेछ। तर जीवन संघर्ष हो र संघर्षरत साधना गरे सफल भइन्छ भन्ने मान्यताले मल्लिका कार्कीलाई अहिले लोकप्रियताको सिढी चढाउँदै छ। उदितनारायण झासँग गाएको ‘लाजको लाली पोतेर आइदेउन’ गीतबाट चर्चित बनेकी मल्लिकाको हालै मल्लिका नामक एकल गीति एल्वम पनि बाहिर ल्याएकी छन्। ० हिजो आज कता व्यस्त नि? भर्खरै मात्रै मल्लिका नामक पहिलो एकल एल्वम लिएर स्रोता माझ आएकी छु। साथै चलचित्रहरूमा पनि गीत गाउदैछ।
० अहिलेसम्म कति गीत गाउनु भयो त? भरखरै सांगीतिक क्षेत्रमा आएकाले धेरै गीत गाउने मौका त पाएकी छैन, तर पनि सयको हाराहारीमा गाएँ होला।
० चलचत्रिमा धेरै अवसर पाउनु भएको हो? उदित नारायण झाको एल्बमको उपहारमा गीत गाएपछि धेरै संगीतकार, गीतकारले अवसर दिनुभयो। यसै बीचमा मैले जीवनमृत्यु, पापी मान्छे २, सलाम छ मायालाई, जिन्दगानी दर्पनछायाँ, यस्तो पनि हुन्छ माया, गोर्खालीलगायतका चलचत्रिमा गीत गाएकी छु। त्यस्तै उदीतनारायण, कुमार कान्छा, आदित्यनारायण झा, राजेशपायल राई, नरेन्द्र प्यासी लगायतका गायक गायिकासँग अन्य एल्वममा पनि गीत गाइसकेकी छु।
० गायन क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो? नेपाली तारामा भाग लिए तर असफल भयो। तिम्रो सुर मेरो गीत, अन्ताक्षरीलगायतका कार्यक्रममा भाग लिए तर सफल भइन तर पनि एल्वम निकाल्छु भनेर संगीतकार आलोश्रीको स्टुडियोमा पुगे। मल्लिका भन्ने एल्वमका गीत रेकर्डिङ गर्न क्रममा आलोकश्रीले उदितनारायणको एल्वम उपहारको लाजको लाली भन्ने गीतको डमी गाउन दिनुभयो। पछि मेरो स्वर सुनेर उदित नारायणले मलाई नै गाउन दिनु पर्छ भनेपछि मैले अवसर पाएँ।
० छोटो अवधि मै लोकप्रिय गायिकाको सूचिमा पर्नु भयो, कुनै गायिका हिट हुन संगीतकारको दह्रो साथ चाहिन्छ भन्छन् त्यही प्रमाणित भएको त होइन? तपाईले दह्रो साथ भन्नुभयो, यसलाई नकारात्मक रुपमा लिनु भएन। गायक होस वा गायिका संगितकारको साथ त चाहिन्छ नै।
० केही संगीतकारसँग तपाईको बेलाबखत नाम जोडिएर आउछ नि? त्यस्तो हैन, मान्छे अघि बढ्यो भने खुट्टा तान्ने प्रबृति छ। त्यही भएर बेलाबखत संगीतकारसँग नाम जोड्ने गरिन्छ तर यो वाइयात हल्ला मात्रै हो।
० त्यही सम्बन्धको कारण मल्लिकाले निरन्तर राम्रो गीत गाउने अवसर पाएको भन्ने पनि छन्, त्यसो भए संगीतकारसँगको सम्बन्धको हर्ल्ला झुठा हो? झुटो नै हो, मलाई पहिलो ब्रेक दिने नै आलोकश्री दाइ हो। त्यसैले पनि म उहाँलाई मान्छु उहाँले नै ब्रेक दिएकाले अरु राम्रो गीत गाउन दिनु ठुलो कुरा हैन। उहाँ मात्रै हैन अहिले मलाई शम्भुजित बाँस्कोटादेखि अरु राम्रा संगीतकारले पनि गाउन दिएका छन। मसँग प्रतिभा भएर नै होला जस्तो लाग्छ नत्र आलोकश्री कैमा मात्र पनि गाउँथे होला नि।
० विहे गर्नु भयो हैन? यो विषयमा केही कुरा नगरौ। ब्यक्तिगत कुरा नसोध्नुस न, हुन्न?
० विहे भएर पनि भा छैन भन्नु हुन्छ रे नि? विहेको कुराभन्दा पनि मेरो गायन क्षेत्रको विषयमा कुरा गरौ न प्लिज। ब्यत्तिगत कुरा तिर नजाउँ।
० फ्यानहरू घट्छन भनेर हो की क्या हो? प्लिज यो विषयमा कुरै नगरौ।
० संगीतको अध्ययन गरिरहनु भएको छ? छु, पहिला एल्वम निकाल्ने बेलामा एक महिना जति मात्रै सिकेकी थिएँ, तर ब्यवसायिक गायनमा आएपछि अहिले गान्धर्व संगीत विद्यालयमा संगीत सिकीरहेकी छु।
Filed under: समचार « हेलो हेलो बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु अन्तत: एकिकरण »